Philipp Lahm oo ka hadlay qaabka ay uga adkaan karaan Real Madrid – Gool FM
Philipp Lahm oo ka hadlay qaabka ay uga adkaan karaan Real Madrid
(Munich) 10 Abriil 2017 Kabtanka kooxda Bayern Munich ee Philipp Lahm ayaa ka hadlay qaabka kooxdiisu ay uga adkaan karto arbacada Real Madrid.
Kooxda reer Spain ayaa arbacada booqan doonta garoonka Allianz Arena ee ay ku ciyaarto Bayern Munich kulanka lugta hore ee wareega sideed dhamaadka Champions League.
Philipp Lahm ayaa ku booriyay ciyaartoyda kooxdiisa inay ahaadaan kuwo sifiican u ciyaara, wuxuuna intaa ku daray inay haystaan tababare Ancelotti oo siwanaagsan u garanaya kooxda macalin Zidane.
“Kulanka Real Madrid waxaa haboon laacib walba inuu soo bandhigo qaabkiisa ugu wanaagsan, waa inaan u shaqaynaa ka koox ahaan, ma ahan kaliya ciyaartoyda ka ciyaaraya safka hore balse waa dhamaanteen” ayuu u sheegay Lahm wargayska Kicker ka hor kulanka.
“Waxaan la ciyaari doonaa koox boos walba ka haysata ciyaartoyda ugu fiican aduunka, sidaas darteed waa inaan aahaa naa koox xoogan”.
“Real waa koox qatar badan ku leh weerarka rogaal celiska ah, waa inaan taxadar badan ka muujinaa arinkaas, waxaan haysanaa Ancelotti waana arin kale oo muhiim iino ah waayo sifiican ayuu u garanayaa Real Madrid”.
“Anigu waxaan ahay Dybala ee ma ihi Messi mana doonayo inaan noqdo Messi-ga cusub ama Messi-ga Mustaqbalka.”.